Amagumbi apholileyo kwindlu yosapho yanamhlanje - I-Airbnb
Amagumbi apholileyo kwindlu yosapho yanamhlanje
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguStefanie
UStefanie ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Amagumbi amabini kwindlu yosapho enegumbi lokuhlambela labucala. Imiswe ngokuthe ngqo kwindawo yogcino lwendalo iGroßer Teich, malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka kumbindi weTorgau. Igadi enkulu, imfihlo eninzi.
La ngamagumbi kwikhaya labucala. Silusapho oluselula, olunengqondo ephangaleleyo sinabantwana abathathu.
La magumbi mabini abekwe kumgangatho ongaphantsi wendlu, ngoko ke aqinisekisa ubumfihlo obuninzi. Kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlala elinebhedi yesofa. 'Ibhedi eyongezelelekileyo' enokwenzeka ngebhedi enomoya ephindwe kabini.
Uninzi lwemini luwela kumagumbi ngeefestile.
Impahla, iTV, isibane esisecaleni kwebhedi, njalo njalo.
Umnyango nje omnye ngaphezulu ligumbi lokuhlambela leendwendwe elinendlu yangasese, ishawa kunye nesitya sokuhlambela.
Igumbi line-microwave, i-oveni encinci, umatshini wekofu kunye neketile, ikofu kunye neti zibandakanyiwe. Izitya kunye nezixhobo zokutya zakusasa kunye neendawo zokupholisa ziyafumaneka. Nangona kunjalo, akukho ndawo yokupheka.
Iitawuli kunye nelinen yebhedi ngokuqinisekileyo zibandakanyiwe.
Kukho igaraji yeebhayisekile njl. kwipropati.
4.97 · Izimvo eziyi-101
Le ndlu ikwindawo entsha egcinwe kakuhle kwindawo engaphandle kweTorgau. Indawo ezolileyo kakhulu, ilungele ukucima. Uthungelwano lweendlela zokuhamba ezijikeleze ichibi elikhulu kunye neTorgauer Ratsforst iqala kwi-100 yeemitha kude.
Kumalunga neekhilomitha ezi-3 kumbindi weTorgau.
Ukuba uyafuna, singakubonisa iTorgau okanye sicebise ngeendawo zokuya kwindawo.
Ukuba unemibuzo, kungcono ukuthumela iSMS okanye ubhale!
Ukuba kuyimfuneko, sinokukuqokelela kwisikhululo sikaloliwe.
Sithetha isiJamani kunye nesiNgesi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Torgau